Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Warbixiyay Dagaalo Culus oo ka Socda Ogadenya
Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Warbixiyay Dagaalo Culus oo ka Socda Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ March 4, 2015
Warbixintii ugu dambeysay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixinaya dagaala kulul oo dhex maray Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo maxaysatada Itobiya. Wararka kale een ka helnay dalka gudihiisa ayaa intaas ku daraya in ciidanka wayaanaha labadii todobaad ee lasoo dhaafay loo dhigay cashiro far waawayn lagu qoray ayna ku waayeen dagaaladaas askar iyo saraakiil badan oo kuwa ay soo khaladeen kamid ahaa. Dagaaladaa ayaa waxay u dhaceen sidan.
27/2/15 Garigo’an oo Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan kamiin ay CWXO ka xidheen waxay ku gubeen 1 baabuur oo nooca ay ciidanka cadawgu qaataan ah waxaana kunaf waayay 10 askari 15 kalana way kadhaawacantay.
28/2/15 Laasgalool oo Tuulada Bulaale ee Gobolka Jarar katirsan dagaal culus oo CWXO iyo kuwa saama laluudka ah ee gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay inta lahubo 15 askari 16 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/3/15 Maygaaga oo Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/3/15 Leedilay oo Birqod katirsan dagaal aad uculus oo CWXO iyo kuwa wayaanaha kudhex maray waxay geesiyaasha xornimo udirirka ah ee JWXO birta kaga asleen ciidan aad ubadan oo kamid ah daroogaysan-ayaasha uu gumaysigu soo khalday waxaana lasoo gaadhsiiyay khasaare aan dib kasoo faahfaahin doono.
2/3/15 Ilcaslay oo dagmada Gunagado ee Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 7 askari 10 kalana waalagaga dhaawacay.